Android မွာ အင္တာနက္ကို ပိုျမန္ေအာင္ ဘယ္လို သံုးမလဲ ? | Myanmar Mobile App
Home How-To Android မွာ အင္တာနက္ကို ပိုျမန္ေအာင္ ဘယ္လို သံုးမလဲ ?
Android မှာ အင်တာနက်ကို ပိုမြန်အောင် ဘယ်လို သုံးမလဲ ?
ဒီနေ့ခေတ်မှာ မြန်ဆန်တဲ့ 4G LTE ဆက်သွယ်မှုများကို နိုင်ငံတိုင်းနီးပါးမှာ အသုံးပြုနိုင်ကြပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင်နေထိုင်တဲ့ အရပ်ဒေသမှာ မိုဘိုင်း အင်တာနက်နှေးကွေးနေလို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ မိုဘိုင်းအော်ပရေတာက ပံ့ပိုးပေးထားတဲ့ အမြန်နှုန်းထက် ပိုမို လျှင်မြန်စွာ အသုံးပြုချင်လို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ သင့်ဖုန်းဟာ နှေးကွေးလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် အောက်ပါ နည်းလမ်းများက သင့်ကို ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။
Opera Max က ဒေတာတွေကို ချုံ့ပေးနိုင်တဲ့အတွက် အင်တာနက်ကို လျှင်မြန်စွာ ကြည့်ရှုစေနိုင်ပါတယ်။ အင်တာနက်မှ ရုပ်ရှင်နဲ့ ဗီဒီယိုများကြည့်ရင်လည်း သူက မထစ်အောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ပါတယ်။ Opera က သူတို့ရဲ့ App ဟာ အင်တာနက် အမြန်နှုန်းကို ၂၃ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်စေတယ်လို့ မကြာခင်က ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ သူက အင်တာနက်ကို လျှင်မြန်စေတဲ့ အပြင် ဒေတာ သက်သာစေပါတယ်။
Facebook ရဲ့ ပင်မ App ဟာ စွမ်းဆောင်ချက်များစွာပါတဲ့အတွက် မိုဘိုင်းဒေတာ သာမက ဖုန်းရဲ့ စွမ်းအင်ကိုပါ အလွန် အကျွံ စားသုံးပါတယ်။ အဲဒီအတွက် Facebook က မိုဘိုင်းဒေတာ သက်သာစေပြီး လျှင်မြန်စွာ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Lite Version ကို ဖန်တီးပေးထားပါတယ်။ အင်တာနက် အလွန် နှေးတဲ့ ဒေသများမှာတောင် သူ့ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Browser မှာ ဓါတ်ပုံများကို ပိတ်ပါ။
ဝက်ဆိုက်များမှ ဓါတ်ပုံများ၊ ကြော်ညာများက သင့် အင်တာနက်ကို နှေးကွေးစေပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ဘရောက်စာ ဆက်တင်ထဲမှာ ဓါတ်ပုံများကို ပိတ်ထားရင် အင်တာနက်ကို ပိုမြန်စေပါတယ်။ ဘရောက်စာတိုင်းမှာတော့ ဒီစွမ်းဆောင်ချက် မပါပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အများစုမှာတော့ ပါပြီး ဒီနည်းလမ်းကို သုံးရင် မိုဘိုင်းဒေတာပါ သက်သာပါတယ်။
လျှင်မြန်တဲ့ ဘရောက်စာကို သုံးပါ။
Chrome ဟာ အလွန် စွမ်းရည်မြင့်တဲ့ ဘရောက်စာ ဖြစ်ပေမယ့် မန်မိုရီကို အလွန် စားသုံးတဲ့အတွက် နှေးကွေးတတ်ပါတယ်။ မန်မိုရီကို အနည်းငယ်သာ စားသုံးပြီး လှျှင်မြန်စွာ အင်တာနက်ကြည့်ချင်ရင်တော့ Opera Mini ကို ညွှန်းချင်ပါတယ်။ Opera Mini ဟာ ပေါ့ပါးသွက်လက်ပြီး ဒေတာ သက်သာစေပါတယ်။
Cache များကို ရှင်းပါ။
Cache ခေါ် အမှိုက်ဖိုင်များဟာ သင့် ဖုန်းရဲ့ စွမ်းအင်များကို စားသုံးနေတဲ့အတွက် အင်တာနက် သုံးရာမှာလည်း နှေးကွေးစေပါတယ်။ ဖုန်းထုတ်လုပ်သူများက သူတို့ရဲ့ ဖုန်းများမှာ Cleaner App များကို ထည့်သွင်းပေးထားပြီး အဲဒီကနေ Cache များအားလုံုးကို တစ်ပြိုင်နက် ရှင်းလင်းနိုင်ပါတယ်။ သင့်ဖုန်းမှာ အဲဒီ App မပါရင် App Cache Cleaner ကို သုံးပါ။
Memory အလွန် စားသုံးတဲ့ App များကို ရှင်းလင်းပါ။
အချို့ App နဲ့ Widgets များဟာ ဖုန်းရဲ့ မန်မိုရီကို အလွန် စားသုံးကြပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ဖုန်းလေးလံရုံ သာမက အင်တာနက် သုံးရာမှာလည်း ကြန့်ကြာစေပါတယ်။ သင့် ဖုန်းမှာ မလိုအပ်တဲ့ Apps , Widgets များကို ရှင်းလင်းခြင်းဖြင့်အင်တာနက် သုံးရာမှာ လျှင်မြန်စေပါတယ်။
Previous articleHuawei ရဲ႕ကိုယ္ပိုင္ KIRIN OS 1.0 ထည့္သြင္းလာမယ့္ HONOR PLAY စမတ္ဖုန္း
Next articleWindows အတြက္ အသံုး၀င္တဲ့ Function Keys မ်ား